အဘယျသို့ Post-orgasm လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေသည်? - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
အဘယ်အရာကို Post-orgasm ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေ?
အော်ဂဇင်လွန် မည်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်မည်သူမျှမသိ အမှန်တကယ် အော်ဂဇင်လက္ခဏာလက္ခဏာများ (POIS) ။
တစ်ဦးကပြန်လည် porn စှဲလမျးသူ:
ဒီခေါင်းစဉ်ဟာကျွန်တော့်အပါအ ၀ င်စွဲလမ်းသူအချို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ သူတို့ဟာ gf နဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမှာနေခဲ့ကြရတယ် (ငါ့ကိစ္စမှာ ၆ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်) ။ ငါသည်ငါ့ gf လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာလျော့နည်းရှာတွေ့တာပါ ပြီးနောက် Orgasm နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း။ အစားငါ compulsive dopamine ရှာဖွေခြင်း mode ကိုဝင်, ပို။ ပို။ လိုသော, အခြားပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးများမှာ / အကြောင်းကိုကြည့် (နှင့်စိတ်ကူးယဉ်) ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရက်အနည်းငယ်လောက်ကြာအောင်ငါ gf ကိုတွန်းထုတ်ပြီး cuddling လိုမျိုးပစ္စည်းတွေလိုချင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ငါသည်လည်းဆက်သွယ်မှုနည်းသည်၊ အကြှနျုပျ၏စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတာဝန်ခံဖြစ်ကြသည်။ ငါဟာငါ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမပြိုကွဲစေလိုတဲ့အပြင်၊ အခြားမိန်းကလေးငယ်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအနှေးနှင့်အမြန်စွန့်ခွာသွားစေမည်ဟုကျွန်ုပ် သိ၍ ခံစားမိသည်။ ပြနာကကျွန်တော့်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော dopamine ကိုရှာတဲ့ ဦး နှောက်ကဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး (သို့) လုံလောက်မှုမရှိပုံရတယ်။ ထိုအခါငါငါ့ gf ကိုချစ်ဒါကြောင့်ငါတစ်ခါတစ်ရံဤမျှထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှု, သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်စဉ်းစားဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ကြပါတယ်။
O ရှိခြင်းသည်ဤမလိုလားအပ်သောခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါ OI ပြီးနောက်အားကြီးသော hangover ရှိသည်နှင့်ငါနိုးနိုးကြားကြားမပါလျှင်, ငါ့ကိုအလွယ်တကူ porn သို့ပြန်ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်တစ် ဦး သည်ခိုင်ခံ့ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစား။ ငါ PMO ကိုပြန်သွားပါကအခြေအနေပိုဆိုးလာသည်။ ငါပြissueနာကို reboot ပြီးအောင်လုပ်လို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်တယ် (PMO မရှိရက်ပေါင်း ၂၀၀ ကြာရင်တောင်) ကျွန်ုပ်၏ gf နှင့် ခွဲ၍ မနေလိုပါ - သူမသည်ပြtheနာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ပြင်းထန်စွာပျက်စီးသော dopamine စနစ်သည်၎င်းကိုသံသယဖြစ်စေပါသည်။
ငါပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမယ်၊ ငါ့ gf နှင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်တဖန်စိတ်ကျေနပ်မှုရနိုင်မလားငါတွေးမိတယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ED နှင့် PE ကိစ္စရပ်များအပြင် O နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လက်ရှိတွင်ပျော်စရာမကောင်းပါ။ အကြောင်းမှာထူးဆန်းသောခံစားချက်များသည် IO အဖြစ်မကြာမီပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုခံစားချက်များကိုကျွန်ုပ်မုန်းတီးသည်။ ဒါပေမယ့်ငါကမကူညီနိုင် အရမ်းထူးဆန်းတယ်၊ ဒီ PMO စွဲလမ်းမှုတစ်ခုလုံး…
လူတွေကတစ်ခါတစ်ရံမှာ orgasm ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်တွေဟာမနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ Postgasmasm လက္ခဏာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိကြပါတယ်။ ဤလက္ခဏာများသည်ဆိုးကျိုးများနှင့်ပြင်းထန်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်များစွာကွဲပြားသည်။ အချို့သည်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ခံစားမှုအပေါ်သာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အခြားသူများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ပြ။
သင်သို့မဟုတ်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်အော်ဂဇင်လွန်ရောဂါလက္ခဏာများကြောင့်ဖြစ်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ ဤနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ပို့စ်များကို:
အမြိုးသမီးမြား: orgasm တစ်ခုအားသင် Hangover Give ပါသလား?
post-အော်ဂဇင်လက္ခဏာတွေပင်အတူတူပင်လူတစ်ဦးအတွက်အမြဲတမ်းအတူတူမရှိကြပေ။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်တဦးတည်း (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, လိင်ဆက်ဆံမှု, ပါးစပ်လိင်, ဒါကြောင့်ထွက်), ထှတျအထိပျရောက်ရှိဖို့အသုံးပြုတဲ့ဆွ၏ Extreme, မွတ်မပြေနိုင်သောရန်တဦးတည်း Bing ရှိမရှိနှင့်ဘယ်လိုမကြာခဏတယောက် climaxing ထားပြီးရှိပြီးလိင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကွာခြား ။ စိတ်ဝင်စားစရာရှိပါတယ် ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထား လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့အော်ဂဇင်ကကွဲပြားခြားနားသော neurochemical သတ္တိလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကသည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထက်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ဖိစီးမှု, လျော့နည်းစေသည်။
အော်ဂဇင်လက္ခဏာလက္ခဏာအားလုံး၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိသုတေသီများသည်ရာသီဥတုပြီးနောက်နာရီဝက် ကျော်လွန်၍ ဦး နှောက်အပေါ်အော်ဂဇင်၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုပါ (မကြာသေးမီကလည်း) အမျိုးသမီးတွေအတွက်တစ်နေ့) ။ တရုတ်သုတေသနပညာရှင်များက ကိုပြု သုတ်ရည်လွှတ်အနည်းဆုံးချဲ့ထွင်တဲ့ဟော်မုန်းသံသရာကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကွောငျးတှေ့ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး။ ဖျောပွသောတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားများအကောင်းတစ်နည်းနည်းလည်းရှိပါတယ် သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ်ပင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသုတ်ရည်ထိပြီးနောက် neurochemical အပြောင်းအလဲများ, အရာအချို့ကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှတက်နေရစ်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။
စိတ္တဇရောဂါဆရာဝန် ရစ်ချတ်အေ Friedman ယေဘုယျအားဖြင့်ယူဆခဲ့သကဲ့သို့ပင်, နာကျင်ကိုက်ခဲ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဒါဘွား၏ Post-orgasm လက္ခဏာတွေ, သေချာပေါက် psychosomatic သို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်းဆက်စပ်မဟုတ်ထောက်ပြသည်။ သူကပင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကျန်းမာလူနာထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ အလွန်ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုတစ်ခါတစ်ရံနာမတော်ဖြင့်သွားပါ post-orgasm ဖြားနာ Syndrome (တားမြစ်မှုခံရ) ။ အကြောင်းတရားများခွဲထုတ်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း, မှန်မှန်ဆေးဝါးများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာအော်ဂဇင်ပြီးနောက်ရှိနေဆဲဟု neurochemical သံသရာအမှန်တကယ်ကြှနျုပျတို့အားလုံးထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နှင့်သတိပြုမိတဲ့သူတွေကတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းဗားရှင်းကြုံနေရကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ, သိပ်ဆွ၏သက်ရောက်မှုများကဦးနှောက်အတွင်းရှိအပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုလြော့ဖို့ပေါ်လာတော်မူသောအဘို့အမိုးသည်းထန်စွာ porn သုံးစွဲသူများရုံနှင်ဒါကြောင့်မသက်မသာကြောင်း overstimulation-One ပြီးနောက်အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သော neurochemical "ရက်နာ" ကြုံနေရသည်ဟုဖြစ်နိုင်သည် ညာဘက်ကျောအခြားထှတျအထိပျ၏ neurochemical ကယ်ဆယ်ရေးရှာကြံဖို့သူတို့ကို။
: ဒီကောင်လေးသူ6လကြာ porn (အသေးစိတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း) ကိုချွတ်ခဲ့တခါ, သူ့ Post-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလက္ခဏာတွေအများကြီးလျှော့ချခဲ့သည်ကိုသတိထားမိ
ငါ PMO မရှိ 56 ရက်အတွင်းဖြတ်သန်းလိမ့်မယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်ငါဟာခံစားချက်ကင်းမဲ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာထင်လဲ ဒီခြောက်လကြာတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါဟာနူးညံ့ / ကျပန်းစိတ်ကျဆင်းမှုကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလို့နောက်ဆုံးမှာပြောနိုင်ပါတယ်။ ဦး နှောက်မြူမှုန်လေးကအခုကျွန်မရဲ့တစ်ခုတည်းသောလက္ခဏာပါ။
ငါ reboot လုပ်တဲ့အချိန်မှာ O. O. ပြီးနောက် Flatline မှာနက်ရှိုင်းစွာကျလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတလေ O ပြီးနောက်မှာအနုတ်လက္ခဏာတွေရှိနေသေးတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာကဒေါသထွက်တတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံယားယံတတ်သည့်မျက်လုံးများ (တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်မျက်ခွံများကိုအသုံးပြုရသည်)၊ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်အိပ်ချင်လာသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ပိုကောင်းလာနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်သည်ပြောပြလိမ့်မည်ကိုသိသောပေါ့ပါးသော POIS တစ်မျိုးကြောင့်လည်းခံစားရနိုင်သည်။
ငါနံနက်ယံ၌အော်ဂဇင်မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည့်အခါ, ငါ့ ဦး ခေါင်းနေ့၏ပထမတစ်ဝက်အဘို့အမြူဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့တက္ကသိုလ်သို့လမ်းလျှောက်သည့်အခါအရာအားလုံးဝေးကွာသောနှင့်အတော်လေးအစစ်အမှန်မဟုတ်ပုံရသည်။ အေးခဲနေသောဖန်ခွက်ကိုကြည့်ရင်းကျွန်တော့် ဦး ခေါင်း၌ကပ်နေသောလေ့လာသူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါစဉ်းစားသောအခါ, ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူငါရှိခဲ့နောက်ဆုံးအော်ဂဇင်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ငါ orgasm အလွန်ငိုက်မျဉ်းနေတဲ့ကာလတိုလေးအတွင်းမှာပဲတော်တော်လေးပုံမှန်ခံစားခဲ့ရတယ်။
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကဗီဒီယို သူက porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်ရပ်တန့်ကြောင်းပြင်းထန်တုပ်ကွေးကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာရှိခဲ့သူတစ်ဦးကောင်လေးသည်။
ဒီလကြာကြာဝေးလံသောဆက်ဆံရေးတွင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားအပေါ်ထားရှိသောချစ်ခင်တွယ်တာမှုမည်သို့တိုးပွားလာသည်ကိုရှင်းလင်းစွာသတိပြုမိခဲ့သည်။ ငါလည်းသူ့ကိုစာရေးတဲ့နည်းနဲ့တွေ့နိုင်တယ်။ ငါ nice စိတ်နှလုံး၏areaရိယာ၌သိသိသာသာခံစားခဲ့ရအလွန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်လျှံနေသောခံစားမှုရှိသည်။ သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးသောနောက်အပြောင်းအလဲရှိသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ခံစားချက် (ရှိနေတုန်းပဲဆိုသော်ငြား) သည်လျော့နည်းသွားပြီးသူမအားစာရေးပုံနည်းသည်လည်းပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါမျိုးဟာပိုပြီးဝေးလံတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီးငါ့ရဲ့စကားတွေမှာလည်းထင်ဟပ်နေတယ်။ နှစ်ပတ်ခန့်ကြာပြီးနောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အရာများပြန်ဖြစ်လာသည်။
ငါအထီး, 33 နှင့်လိင်အပြီးကာလ၏အများစုငါစိတ်ဓာတ်ကျခံစားရသည်အဘယ်ကြောင့်တွေးမိတာပါ။ ဒါဟာအစဉ်အဆက်အကြီးမြတ်ဆုံးလိင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ငါစိတ်ဓာတ်ကျမိပါတယ်နှင့်သူမ၏ဝေးရဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။
ငါက POIS ရှေးရှေးသူတို့ကသူတို့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအော်ဂဇင်နှင့်ဆက်နွယ်သောကြောင့်ထူးခြားသောဖြစ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ ငါကဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်တည်မှုငါ့ထံသို့ထောက်ပြသည်သည်အထိဆက်သွယ်မှုကိုမတတျနိုငျ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အတိအကျကိုဖော်ပြသည့်အခြားလွှမ်းမိုးမှုများအလွန်များလွန်းလှသည်။ ဖြစ်! ကျွန်ုပ်သည်မသိစိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှတဆင့်ဒေါ်လာထောင်ချီ။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နောက်မှထပ်တူထပ်မျှထပ်တူဖြစ်ရပ်မျိုးထပ်မံဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။ ။ ။ ရုံ clockwork လိုပဲ။
ဒါကြောင့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်သလို porn ကို ၁၂၄ ရက်ကြာကြည့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးအော်ဂဇင်သည်လွန်ခဲ့သော ၇၁ ရက်ကဖြစ်သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းမိန်းကလေးများနှင့်သာလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ အကြှနျုပျ၏တိုးတက်မှုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအကောင်းခံစားလာသောအခါမိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်များသောအားဖြင့်လာတတ်သည်။ သို့မဟုတ်ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖြစ်စေကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည်ရှုပ်ထွေးအဆုံးသတ်။ အော်ဂဇင်မရှိဘဲပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှုပ်ထွေးမှုသည်တစ်ပါတ်ခန့်ကြာကြာနာကျင်မှုခံစားရနိုင်သည်။ အော်ဂဇင်နှင့် ပတ်သတ်၍ ရှုပ်ထွေးခြင်းသည် ၂၁ ရက်လုံးလုံးစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဒီသံသရာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်ကြောင့်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ပြီးပြည့်စုံပြန်လည်စတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ငါနင့်ကိုပိုကျန်းမာလာအောင်ငါပြန်လည်စတင်ရန်အနည်းဆုံးပြောခြင်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ထပ် Personal Account
POST-orgasm NEUROCHEMICAL Shift အထောက်အထားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်သုတေသနစာရင်းကိုကြည့်ရန်